A Dị ọcha, Modern Design na a siri ike Heritage nke ebube - Kere na iri puku oaks
Home / Imepụta ime ụlọ / A Dị ọcha, Modern Design na a siri ike Heritage nke ebube - Kere na iri puku oaks
2020 / 10 / 18 nhazi ọkwaImepụta ime ụlọ 1289 0
Iri puku Oaks Design Design Design Alliance
Osimiri Yellow, Taihang nke na-ewu ewu na Fen River, nke na-aga n'ebe ugwu na ndịda, jikọtara ala dị n'ime. Kemgbe oge ochie, obodo dragọn nke Taiyuan bụ akụ dị ukwuu nke feng shui, dị ka nkume dị n'etiti ala dị egwu ma dị egwu, na-ahụ mgbanwe ndị a na-apụghị ịgụta ọnụ.
Ogige ahụ ga-eme n’ọdịnihu na osimiri gbara etiti etiti obodo ọhụrụ ahụ, nke bụ otu n’ime isi ihe dị mkpa gbasara obodo ahụ. Ka obodo ochie na-ekwo ekwo na-ebelata n'etiti mmepe mmepe obodo ngwa ngwa, obodo ọhụrụ nwere ume ọhụụ ga-eji ọkụ nke ya ọkụ. Ezubere ụlọ ọrụ ire ere Rongchuang ka ọ bụrụ akara nke obodo ọhụrụ ahụ, site na nke ndụ ọhụụ mara mma ga-apụta maka Taiyuan Longcheng.
Ugwu Na Ugwu
Abstract Construction nke Otu Obodo
Ọ bụrụ na a ga-anọchi anya obodo site na ụlọ na oghere, kedu ka Dragọn nke Taiyuan ga-adị? Na maapụ ahụ, ala dị larịị, ugwu na osimiri abụghị naanị na-akọwapụta ọnọdụ nke obodo ahụ, kamakwa na-emetụta agwa ya ogologo oge mgbanwe. Ihe eji mara obodo ahụ bụ ogologo oge mgbanwe ya gbanwere. Enweghị curl na curl nke obere obodo dị na ndịda, ma ọ bụ na nnukwu oke ọkụ nke obodo na-achọ ikwu okwu, kama ọ bụ nnukwu ọmarịcha na agwa adịghị mma nke obodo ahụ.
Na oghere, usoro kwụ ọtọ na polylines depụtara ma kewaa mpaghara ọrụ dị iche iche; nnukwu akụkụ nke ihe ịchọ mma ihe na-eme ka nkọwa na-enweghị isi belata; nwa na-acha ọcha na-agbanwe ma gbanwee dị ka ụda doro anya; artwork na odida obodo bụ vitality n'etiti obodo na odida obodo.
Site na ala mbu rue ulo nke abuo, oru a na-ewu ewu nke obodo nke ugwu, okwute na osimiri mejuputara, na idobe ihe osise na ihe ndi ozo na-emeghi ka obodo ahu banye na mbara igwe juputara n'echiche.
Na nhazi ahụ, ahịrị na agba gbanwere, oghere, dị ka obodo, na-etolite ụdị nke ya.
Na-abanye Eluigwe na-efegharị
Na-abanye n'ọnụ ụlọ ogologo ụlọ, ụlọ nnabata ahụ na-emeghe ma na-enwu gbaa, a na-ejikwa oji dị warara nke ahụ dum kpuchie ya na ogologo oji dị warara nke si n'elu gaa n'ala, dị ka nsụda mmiri nke na-agbada site na ugwu. Tebụl nnabata, nke ejiri oji na ọcha rụọ, dị ogologo, warara ma dịkwa mfe, na -emepụta mmetụta nke ịdị mfe megide nnukwu oghere.
Akara nke ọkụ na-agbadata site na dome na nkwonkwo okwute na mgbidi na-etolite mmekọrịta dị larịị na nke kwụ ọtọ nke na-eme ka izu ike, imeghe na nkwụsi ike.
Site na ebe nnabata aka ekpe gaa sandbox na mpaghara etiti, nnukwu igbe ọkụ na-apụta site na uko ụlọ wee kpuchie elu ụlọ aja n'elu nkume ahụ, yana n'okpuru mgbidi ojii na ọcha n'ihu, ala azụmahịa niile nke Rongchuang jupụtara na ike.
Site na ala mbu, aka ojii na-agbadata ma na-agbadata, na nkwụsị ọcha ole na ole ikpeazụ na-ada n'ala, dị ka ọnụ ụzọ mepere emepe, na-eche ka ndị ahịa duga na mpaghara ihe omimi.
Ewezuga steepụ ahụ, a na-eji osisi oji kpuchie onye na-ebuli ya elu, sitekwa n'akụkụ ọzọ, na-ele anya site na ala steepụ ahụ, usoro nke ụlọ ahụ dị ka ugwu na-arị elu na-arị elu ma na-eto na oghere ahụ.
Thelọ ojii ahụ si na mbara igwe na-apụta site na mbara igwe dị ka mbara igwe na-efegharị, bọlbụ na-acha ọcha na-acha ọcha na ihe osise mbara igwe na-ekwu banyere ohere nke ndụ n'ọdịnihu, ntinye na ihe osise a na-ahụkarị akara ndị sitere n'okike, echiche na-enweghị atụ na-amalite ịse n'elu na ojii na ọcha dị na mbara igwe, na ọrụ na ọrụ nke oghere agaghịzi abụ otu.
N'ebe a na-ekwurịta okwu na nso windo dị na ala mbụ, a na-emezi ihe na agba.
A na-etinye marble sitere n'okike site n'ala ụlọ ahụ, ọkụ dị nro na-ada n'ala, na-ekwekọ oji na ọcha.
Mgbakwunye nke isi awọ na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-eweta ụda nke oge opupu ihe ubi. N'elu kapeeti na-acha isi awọ, sofa dị nro na nkuku dị ka nkume dị na ala, oche oche na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-aga n'ihu omume a. Ogwe aka na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-aga n'ihu n'otu ụdị ahụ, na-etinye ugwu, ala na mmiri n'ime ihe na arịa ụlọ, yana nkọwa bara ụba niile edozi iji mepụta ọnọdụ izu ike na mpaghara nzukọ.
Ngwongwo na-agba agba, ihe ngosi ọkụ 'annular eclipse' n'abalị na ihe osise meteorite nke na-aga n'ihu na-akpọte ma gbanwee echiche gị na mpaghara a, dị ka a ga - asị na ị na - ele ákwà mgbochi na-enweghị nkwụsị.
Laghachi na Obi ebere
Gbakọta ihe na-acha ọcha na nke ọcha na ala nke abụọ, eluigwe na ala na-ama jijiji na ụdị nnwere onwe na-eto eto nke okike na-ada mbà ma jiri oghere ime ụlọ na-anọchi ya.
Nnukwu ebe osisi dị n’elu ụlọ na n’elu ụlọ ahụ na-enye ohere ahụ ihe yiri nke ọhịa, kama n’ọnụ mgbidi, a na-egosipụta shelf nke ịdị elu dị iche iche na eziokwu agwakọtara kọwaa ebe dị iche iche. Ngosipụta ngosipụta nke arịa ụlọ, akwụkwọ na eserese na-anakọta mmetụta mmadụ site na enweghị nsọtụ ma debe ha n'ọnọdụ ndị ọzọ.
A na-ahazi ebe ezumike ụmụaka ahụ na oghere a, na-acha ọcha na-acha akwụkwọ ndụ na-acha ọcha na nke dị nro, ihe ụmụaka na-egwuri egwu na agba dị mma ma dị nwayọọ, nke gosipụtara na obodo.
Ihe nkedo siri ike ma dị mma na ebe a na-ekwo ekwo n'etiti etiti ahụ na-eme ka ebe izu ike dị nchebe na oke ọhịa dị n'ime obodo, ebe ị nwere ike ịnọdụ ala n'akụkụ ekwú ahụ na-enweghị nsogbu ọ bụla, ma chere obere oge iji banye ebe ngosi ahụ, emecha mgbanwe zuru oke nke ohere na ọnọdụ.
Ehihie na abalị, okwute na osimiri, igwe na obodo …… weaves na-emegiderịta ma na-eme ka onyonyo jikọtara ọnụ site na mbara igwe, na-eme ka onyinyo obodo oge ochie dịwanye elu ma na-agbasawanye oke ya, dịka akụkọ ọhụụ na-egosi na nhazi obodo ọhụrụ
Imepụta Imepụta: W Studio Oak Architectural Design Consulting (Beijing) Co.
Haziri site na Hua Wei na Song Weihua
Otu ndi otu: Zhao Panpan, Wang Limei, Li Xiangyan, Liu Qian
Otu A: Li Meng, Bai Lan, Zan Xiangyu, Suo Li
Mpaghara Okike: Saleslọ Ọrụ Ahịa 1000m2
Oge imewe: 2020.5
Bọchị mmechi: 2020.9
Foto: VIEW Architecture Foto
W Design bu ulo oru ohuru ohuru nke ndi oru emeputara na 2015. Ndi isi ha na ya sitere na ndi oru ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama n’uwaa. Ha bụ ọkachamara na ile ọbịa, ntụrụndụ, ọrụ obibi na ọrụ ọfịs, yana ndị nrụpụta isi ha na ndị mmekọ ha nwere ihe karịrị afọ 20 nke ahụmịhe imepụta yana echiche mba ụwa. Nraranye nye oru ngo, ihe ohuru, nzaghachi na ihe bu nkpuru obi nke ulo oru.
Nke gara aga :: Nnu Nwere Ike Sweettọ Mori Space, Natural Cozy Bourgeoisie Ọnọdụ | BRJ .BỌR. Osote: Light na Extravagant Minimalism Bụ A High Mma!